नर्सहरु पदक पाउन योग्य छैनन् हो, सरकार !
जेठ १८, २०७४ बिहिवार २२:४४:०० प्रकाशित
हरेक सालजस्तै यस वर्ष पनि सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदक वितरण गर्‍यो। सधैँजस्तो यस पटक पनि पदक पाउने व्यक्तिहरुको चयन र वितरणको काम विवादमा मुछियो। यतिसम्म कि, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त, 'कति पटक विवाह गरे पदक पाइने हो सरकार?' भनेर ठाडै प्रश्न गरे। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहाललाई 'सुप्रबल जनसेवाश्री' पदक दिने निर्णयप्रति व्यङ्ग्य गरेका थिए।
सामाजिक सञ्जाल केही दिन पदकमय बन्यो। पदकको विषयलाई लिएर निकै बहस र व्यङ्ग्य भए। सरकारको आलोचनासमेत भयो। प्रकाशले उक्त पदक नलिने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस नै लेख्नुपर्यो।
हुनत ओलीको नेतृत्वकालमा पदक वितरण गरिँदा पनि अहिलेकै जस्तो हचुवाको भरमै धेरै पात्रहरु चयन गरिएका थिए। हरेक वर्ष केही राम्रा मान्छेको साथमा आफन्त, नातागोता, पहुँचका आधारमा पदक वितरण हुँदै आएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा नेकपा एमालेले विरोध गर्यो, भोलि एमालेको सरकार भए कांग्रेस–माओवादीले विरोध गर्लान्। तर, नातावाद र कृपावादमा चुर्लुम्म डुबेका चयनकर्ताहरुले निष्पक्ष रुपमा योग्य मानिस छान्नेछन् भन्ने विश्वास हराउँदै गएको छ। समाजमा विशिष्ट योगदान दिने व्यक्तिहरु मध्येबाट सीमित व्यक्तिलाई छानेर राष्ट्रले सम्मानित गर्नु वा राष्ट्रबाट सम्मानित हुनु गर्वको विषय हुनुपर्ने हो। तर, यहाँ उल्टो भइरहेको छ।
पदक पाउनेहरुको सूचीमा डाक्टर, बैंकर, खेलाडी, इन्जिनियर, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षक, समाजसेवा जस्ता अनेकाअनेक विधाबाट मान्छे चयन भए। तर, विडम्वना यति लामो सूचीमा एक जना पनि नर्स अँटाएनन्। सरकारले ६८ हजार नर्समध्ये एक जना पनि त्यस्तो नर्स भेटेन छ, कि उनी राष्ट्रले दिने पदकको हकदार होउन्। हुन त, आफैँ छनौट समितिमा बसेर पदक पाउने सूचीमा आफ्नै नाम सिफारिस गर्न हात नकमाउनेहरुले समाजमा साँच्चैको योगदान दिने व्यक्तिहरु कसरी पो पत्तो लगाउन् र। यसो भन्दै गर्दा जो-जो पदक पाउन योग्य थिए र पाए उनीहरुप्रति कुनै गुनासो होइन। पदक लिन्न भन्नेहरुप्रति पनि गुनासो होइन। गुनासो त पदक पाउनेहरुको नाम चयन गर्न बसेकाहरुको मानसिकताप्रति हो।
दिनरात नभनी, आफ्नो ज्यान, परिवारको प्रवाह नगरी अरुको सेवामा समर्पित हुने नर्सहरु एक जनालाई पनि किन सम्झेन सरकारले? नर्सलाई पदकयोग्य नठानिएको यस वर्ष मात्र होइन, गत वर्षको सूचीमा पनि कुनै नर्सको नाम छैन। स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको नर्सिङ पेशालाई आखिर किन सरकारले उचित मूल्यांकन गर्न सकेन?
हुन त, पदक पाइएन भनेर हामी हाम्रो पेशा र सेवाप्रति कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौँ। तर, राष्ट्रले विभिन्न पेशामा रहेर सेवा पुर्‍याएका सयौँलाई पदक वितरण गर्दा हाम्रो नर्सिङ पेशालाई बेवास्ता गरेको प्रसंगले बारम्बार मनमा घोचिरहेको छ।
हाम्रो सेवा कसैले पदक, सम्मान, तक्मा दिन्छ भनेर गरिने सेवा होइन तर पनि यति धेरै विधामा नर्सिङ नपर्नु दुखद् कुरा हो। किन हामीलाई सम्मानयोग्य ठानिँदैन। सरकारलाई सोध्न मन छ, साँच्चै यति धेरै नर्सहरुमध्ये एक जना पनि सम्मान गर्न योग्य छैनौँ त? के सम्मानको लागि पहुँचवाला वा नेता–कर्मचारीका छोराछोरी नै हुनुपर्ने हो र?
- थपलिया स्टार अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।